An-kitsim-po : tokony hijery lavitra noho ny loza … | NewsMada
An-kitsim-po : tokony hijery lavitra noho ny loza …
Manimba zavatra betsaka ny fiovan’ny toetr’andro ankehitriny, mihamafana, saika maneran-tany mihitsy. Potika ao anatin’ny indray mipi-maso izay nihariana nandritra ny taona maro, vokatry ny fihanaky ny afo. Vao tamin’ny faran’ny herinandro iny, tojo izany ny kaominina Ambodimanga, ao anatin’ny distrikan’i Maevatanana.
May kila tanteraka io tanàna io, ny trano sy izay entana tao anatiny. Mba tsy nisy ny aina nafoy. Mampalahelo, raha ny any ivelany eo ny trano fiantohana miantoka izay may rehetra, mamerina izany amin’ny tompony fa ny eto amintsika, vitan’ny tolotra vary amin’ny gony sy fanomezana hafa avy amin’ny manam-pahefana. Isaorana aza izy ireo mba manome izany, hararaotin’ny sasany indray aza ireny amin’ny fotoana sasany.
Eo anefa ny BNGRC, atao isahana manokana ny vokatry ny loza voajanahary, tokony hijery paikady hafa, hijery lavitra vokatry ny fahavoazan’ny mponina. Vita ihany ny anio sy ny ampitso fa ireo mponina very fananana ireo, mety tsy ho tafaveriny intsony izay nisasarany nandritra ny taona maro, koa vao mainka hitombo indray ny voka-dratsy haterak’izany.